Nginesivumelwano nebhange lami uma kufanele ngifaye impendulo kwi-Fore Forexposed ye-NJ? - I-NJ & NY Yezindlu Nezindlu, i-Probate, i-Foreclosure Defense kanye ne-Bankruptcy Lawyers
Ikhaya / Blog / Ukuvikelwa Kwemboni YeNew York / Nginenkokhelo nebhange lami uma kufanele ngifayile impendulo kwi-Fore Forexposed ye-NJ?
January 3, 2020 Ukuvikelwa Kwemboni YeNew YorkShiya amazwanaUVeer Patel
Igama lami nginguVeer Patel. Ngingummeli futhi ngisebenzisana noPatel, uSoltis kanye nabameli bakaCardenas kwezomthetho eFree State. Ngenza umthetho wokubikezela.
Namuhla ngiphendula umbuzo: "Ngisebenzisene nomuntu obolekayo ingabe kusamele ngifake impendulo kuzenzo zami zokuvezwa kweNew Jersey?"
Angikwazi ukukutshela ukuthi kukangaki amaklayenti acabanga ukuthi asebenze isivumelwano nalowo obolekayo. Bathola isithembiso komunye umuntu ocingweni bethi, “Yebo ushintshiwe. Ungakhathazeki ngakho. Yenza inkokhelo yakho nje. ”
Noma, bacabanga ukuthi bezwe okuthile. Noma, abezwanga kahle. Noma, bacabanga ukuthi isimo sabo sangaphambi kokubekwa kwamacala sisematheni ngoba ibhange selithe. Ngakho-ke, bavumela isimangalo sihambe kuze kube yilapho sekwedlule isikhathi.
Ukudalulwa empeleni kuqediwe ngenkathi besazama ukwenza okuthile ngebhange labo. Umgomo akufanele uphuce noma yiliphi ilungelo lakho ngaphandle kokuthi kufanele. Ngakho-ke, uma udlule emugqeni othile wesikhathi futhi ucabanga ukuthi awukwazi ukufaka impendulo. Ngingasho ukuthi usazofaka impendulo ukuvikela amalungelo akho uma kwenzeka kwenzeka okuthile ngebhange.
Lokho ngukuncoma kwami. Faka impendulo. Vikela amalungelo akho.
Izikhathi eziningi iklayenti lizothola ukuguqulwa. Lapho kungena amaklayenti azothi, "Ngithole ukuguqulwa kwemalimboleko, kepha nginezinsizakalo nezikhalazo lapha. Ngabe kufanele ngiphendule impendulo? ”
Ngibheka ukuguqulwa kanye nemibandela ehambisana nakho. Ngibheka ukuthi ngabe inkokhelo yecala isifakiwe yini noma cha. Noma uma uhlelo lwabo lokukhokha lungenzeka futhi empeleni lungcono kunalokho abanakho njengamanje.
Imvamisa ibhange lithumela okuthile ngokubhala okukhombisa ukuthi unezinyanga ezintathu kuya kweziyisithupha lapho kufanele ukhokhe khona ngesikhathi noma kufanele ukhokhe inani elibekiwe bese kuthi uma usukwenzile lokhu kukhokha uzothola ukuguqulwa okungapheli.
Uzosayina futhi ubuyisele amaphepha ebhange. Uma ungatholanga lutho olubhaliwe ebhange lakho, khona-ke izingqinamba ingabe awunawo ukuguqulwa kwemalimboleko. Ngemuva kwalokho ukuguqulwa kuqoshwa futhi i-voila unemigomo emisha kwimpahla yakho ebanjiswayo.
Ukuchayelwa kusengaphambili kuyachithwa futhi ulungile. Ngakho-ke uma iklayenti lingena futhi liphakathi necebo kepha abazi imigomo yokuguqulwa. Kufanele ngifunde ukuthi kungani becabanga ukuthi banokuguqulwa. Kuze kube lapho ukukhokha kwecala sekuphelile futhi iklayenti lamukele leyo migomo, akunaso isiqiniseko sokuthi ukubekwa icala ngokusobala kuzoma.
Lapho nje ukuguqulwa kwemalimboleko kungena futhi bakhethe mhlawumbe ukungamukeli imigomo. (Sibe nenkinga ngesinye isikhathi lapho isilinganiso senzalo sikhuphuke ngo-4% ngaphezulu kwalokho ikhasimende lethu elalikhokha futhi besizokhokha enye imali engaphezulu kwama- $ 200,000 ngenzalo ngesikhathi semalimboleko ukuguqulwa.) Ngakho-ke, uma bengazange bafake impendulo, babeyobe banciphise amalungelo athile. Lokhu kuzovumela ukuthi ibhange lisheshise umugqa wesikhathi sokudalulwa kwabo.
Kulesosimo uyazi ukuthi bekungaba ngcono ukufaka impendulo ekubonakalweni kwangaphambili. Kwesinye isikhathi abantu basaqhubeka nobunzima lapho besebenza ngokuguqulwa kwemalimboleko yabo. Ukuthi baphakathi kwemisebenzi noma ngabe othile uyagula noma bayagula kodwa izinto zibukeka zingcono. Kunezimo eziningi zokuthi kungani abantu bathola uhlelo lokukhokha kwecala, bese benza inkokhelo eyodwa noma ezimbili bese bengakwazi ukwenza eyesithathu. Noma, uyazi ukuthi zenza ezintathu bese ziphhuthelwa okwesine ngaphambi kokuba ukuguqulwa okungapheli kuqoshwe.
Uyazi kuleso simo, uma ungafakanga mpendulo, uvumele ukusheshiswa komugqa wesikhathi kuwe. Futhi, kukulimaza ngempela uma uma udinga nje enye inyanga noma ezimbili ngokuhamba kwesikhathi ukusebenzela izinto ngempela ukuze ubuye ume ngezinyawo zakho.
Lezo izimpendulo umbuzo. Ngicabanga ukuthi kusamele ugxile kakhulu enkantolo yakho yasenkantolo ukuze uqiniseke ukuthi awulahli amalungelo akho, futhi ube nohlelo lokusekela emuva.
Uma wena uma uthole okuqukethwe kule vidiyo kusiza noma ukujabulela okuqukethwe sicela ushaye inkinombo efanayo bese ubhalisa.
Uma unemibuzo: Shayela u-201-256-1805 noma usithumelele i-imeyili [Email protected]